Pio hena miaraka amin'ny voanjo sy paprika - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Pio hena miaraka amin'ny voanjo sy paprika
Carnes36 minitraMofomamy 4 misy 75 g eo ho eo. People150 kaloria
Ireto Voanjo Paprika Meatloaf ireto dia mety amin'ny fitsangatsanganan'ny fianakavianao satria izy ireo dia tena mora entina.
Rehefa mandamina fitsangatsanganana miaraka amin'ny fianakaviana iray manontolo ianao dia tsy maintsy mihevitra zavatra maro. Na dia ny manan-danja indrindra aza dia ny menio satria tsy maintsy mora atao, entina ary ambonin'izay rehetra tian'ny fianakaviana rehetra. Mazava fa afaka mampiasa sandwich foana ianao fa raha zavatra hafa no tadiavinao, ny pie hena sy ny fanapahana mangatsiaka namboarina dia safidy tsara.
Miaraka amin'ireo cupcakes matsiro ireo, a Gazpacho ary ny silaka melon vaovao dia hanana menio matsiro ianao tsy ny hitondra any amoron-dranomasina na eo amin'ny pisinina ihany, fa koa hankafizinao ao an-trano.
1 Pie hena, voanjo ary paprika
2 Te hahafantatra misimisy momba ireo Meatloaf Peanut Paprika ireo?
Pie hena, voanjo ary paprika
Ireo pie hena ireo dia tsotra sy mora entina ka irinao ny hitondra azy ireo aminao amin'ny dianao rehetra.
Fanompoana: Mofomamy 4 misy 75 g eo ho eo.
150 g tratra akoho no diovina ary tapahina
Bacon-tsetroka 50 g, hetehezana
30 g ny kesika tsy misy lactose miely.
Atody antonony 1
Voanjo 20 g, voahidy
Paprika mamy 1 sotro fihinanana (habe volontany)
Manomboka ny fomba fahandro izahay, manamboatra lasitra tsirairay.
Napetrakay tao anaty vera ny tratran'akoho sy ny bacon nifoka. Torotoro izahay mandritra 15 segondra, hafainganam-pandeha 5.
Manaraka izany, ampianay ny fromazy, ny atody, ny voanjo voanjo ary ny paprika mamy. Manaova fotoana ary afangaro mandritra 15 segondra, hafainganam-pandeha 4, fihodinana havia.
Izahay dia mizara ny fangaro eo anelanelan'ny lasitra izay noforoninay. Miaraka amin'ny fanampian'ny sotro isika dia mametaka azy ireo ary manalalaka ny endriny.
Manarona azy ireo amin'ny alimo aluminium, manidy azy ireo tsara. Apetrantsika ao amin'ny varoma izy ireo ary fonosintsika amin'ny takelaka misy dakozia roa.
Sasainay ny vera mba hanesorana ireo sisa tavela amin'ny koba. Nametraka rano 500 g izahay, apetraka amin'ny toerany sy ny programa ny varoma 30 minitra, maripana varoma, hafainganana 2.
Amin'ny faran'ny fotoana dia manokatra ny varoma amin'ny lafiny mifanohitra aminay izahay ary manala ireo mofomamy tsirairay. Esorinay tsara ny taratasy an-dakozia ary koa ny aluminium.
Mametaka azy ireo izahay ary manamboatra azy ireo amin'ny voanjo na ravina maintso toy ny seleria, arugula, coriander na chives.
Ny kaloria dia aseho isaky ny mofomamy tsirairay. Aza adino ny manala ny crust henjana amin'ny bacon alohan'ny handrarahana azy.
Te hahafantatra misimisy momba ireo Meatloaf Peanut Paprika ireo?
Ao amin'ny Thermorecetas dia tianay ny hahazoanao tombony betsaka indrindra amin'ny Thermomix anao ka izany no mahatonga anao manolotra fomba fahandro matsiro izahay so it mahandro miaraka amin'ny vera sy ny varoma.
Azonao atao ny manamboatra an'io fomba fahandro io eo am-panomanana crème na ny fomba fahandro hafa izay misy a mahandro mitovy na avo kokoa 30 minitra.
Ary raha mahandro amin'ny vera tsy misy ianao dia araraoty ny fanomanana sasany atody nandrahoina. Avy eo ianao dia afaka mampiasa azy ireo hanomanana atody misy voaroy na amin'ny fomba fahandro hafa.
Raha tsy te-hanasarotra ny fiainanao ianao dia afaka a hena tsy manam-paharoa ho an'ny fianakaviana manontolo. Mila mampiasa bobongolo lehibe fotsiny ianao fa alao antoka fa ny habeny mety izy mba hikatona tanteraka ny varoma.
Mba hanaovana an'ity recette ity dia azonao ampiasaina voanjo misy sira tsy misy sira. Raha mampiasa ity farany ianao dia tsy mila manampy sira kokoa amin'ilay mofomamy.
Ireo mofomamy azonao atao ataovy mialoha ary tazomy ao anaty vata fampangatsiahana mihidy mafy izy ireo. Maharitra anao hatramin'ny 4 andro izy ireo raha mbola tsy tapaka ny rojo mangatsiaka.
Amin'ity fomba fahandro ity, irery ihany tsy misy glotena ary efa nampiasa fromazy azo niparitaka izahay Tsy misy lactose ho an'ny zatra an'ireo tsy mahazaka an'io alergen io. Na ahoana na ahoana, alao antoka fa tsy misy gluten na ronono akory ny bacon. Amin'ity fomba ity dia hialanao amin'ny fampitahorana tsy ilaina.
Fanazavana fanampiny - Gazpacho misy serizy / Menio feno: salmon steamed sy consommé legioma / Resipeo: mahandro akoho amam-borona miaraka amin'ny Thermomix
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Carnes, Tsotra, Resaka varoma
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Recipe manokana » Resaka varoma » Pio hena miaraka amin'ny voanjo sy paprika
Salama, azo soloina dibera voanjo ve ny voanjo?
Tsia, satria ny tadiavinao dia ny fikasihan-tànana mamy ary ny dibera dia manome tsiro fa tsy ny firafitra.
Ny azonao atao dia ny manolo azy ireo amin'ny voankazo maina hafa toy ny pistachios na voanjo kesika.
Palmeritas miaraka amin'ny koba brioche
Spaghetti varimbazaha manontolo miaraka amin'ny chirlas